कस्तो हो कालो धान ? नेपालमा यसको कस्तो छ सम्भावना ! - krishipost.com
कस्तो हो कालो धान ? नेपालमा यसको कस्तो छ सम्भावना !
कालो धान अर्थात ‘जी–६० ब्ल्याक राइस’ उच्च पोषणयुक्त धान हो । एक व्यक्तिले एक दिनमा १५ ग्रामका दरले अन्य चामलमा मिसाएर खाएमा क्यान्सर, अल्जाइमर्स, मधुमेह र ब्लड प्रेसरजस्ता रोगविरुद्ध लड्न सक्ने क्षमता कालो धानमा रहेको कृषि विज्ञ केदार बुढाथोकी बताउनुहुन्छ । अन्य चामलजस्तै गरी सेवन गरेमा उच्च पोषण तत्वका कारण कालो चामलको भात पचाउन सकिँदैन ।
पकाउनुअघि दुई घन्टा भिजाएरमात्रै पकाउनुपर्ने र भिजाएको पानीलाई सर्वतको रुपमा सेवन गर्दा स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुने उहाँको भनाई छ ।
यो चामल संसारभर उत्पादन भएको छ।जापान, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसियालगायत थुप्रै देशमाभएको खेती भई आएको छ भने चीनमा ६७ प्रतिशत खेती हुने गरेको छ।यो धान अत्यन्त महँगो छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार प्रतिकिलो ८ देखि २५ डलरमा खरिद बिक्रीभइरहेको छ।
यो चामलमा के – के पोषक तत्वहरु पाइन्छ त?
श्रोत : विभिन्न विज्ञहरुका लेख तथा अनलाइन पोर्टलबाट संकलन